Nepal Dayari | कठै बि’चरा दुधे बालक छोडेर आमा नाठो’सँग फरार, बच्चाहरुको भयो बि’चल्ली ! ब’च्चाहरु च्या’पेर मिडियामा (भिडियो हेर्नुहोस)
साउन ७, २०७८ बिहिबार ५७४ पटक हेरिएको
याे समचार पनि पढ्नुहोस् : हामी सबै जना आआफ्नो कामको कारण बाहिर निस्किने गर्दछौँ । तर बाहिर निस्किँदा संयोगवश हाम्रो शरीरमा पंक्षीहरुको दिसा पर्छ र हामी कतिपयले त त्यसको अनुभव पनि लिइसकेका हुन्छौँ । तर उडिरहेको चराको दिसा हाम्रो शरीरमा पर्याे भने के हुन्छ ? यो कुरा सबैलाई थाहा नहोला ।